अब पालो बडिमालिकाको ! - ParyatanBazar.com
अब पालो बडिमालिकाको !
पर्यटन बजार११ भाद्र २०७८, शुक्रबार मा प्रकाशित
भदौ ११ , काठमाडौँ। सुदूरपश्चिमकै महत्वपूर्ण र प्रमुख धार्मिक पर्यटकीय स्थल हो बडिमालिका। बाजुरा जिल्लामा पर्ने यो सुन्दर ठाउँ समुद्र सतहदेखि ४,२०० मिटर उचाइमा पर्छ। बडिमालिका धार्मिक मात्र नभएर पर्यटकिय हिसावले पनि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । नजिकै देखिने सुन्दर हिमाल, हिउँ कुल्चन पाउने सौभाग्य र मनोरम प्राकृतिक दृश्यहरु बडिमालिकाका गहना हुन् ।
विभिन्न फूलहरु, अच्चमका रुखविरुवा, ढुंडा, पुराना गोठहरु, चट्टान, ठूला मैदान, दलदले जमिन वा सिमसार क्षेत्र, त्रिवेणी नदी, खेतीवेती, कर्णाली नदी, सान्नी रास्कोट, त्रिवेणीबाट तेस्रो तप्पड कटेपछि नौमाने डाँडा, लौरिविनायक जहाँ यात्राका वेलाको लठ्ठी चढाउने गरिन्छ, जोगी पहिरो, जोगीढुंगाबाट,बासुधारा अर्थात सहस्रधारा, वडिमालिका मन्दिर । मन्दिर पछाडिबाट देखिने दृश्य । धर्मद्धार, धवलपुरी दह र नाटेश्वरी मन्दिर समग्रमा बडिमालिकामा देखिने अलौकिक दृष्यहरु हुन् ।
बडीमालीकाको सौन्र्दय भनेकै विशाल फाँटहरु हुन् । तर अचेल यी फाँटहरु बिस्तारै मासिँदै छन् । यी फाँटमा अनावश्यक चरन र जडीबुडी चोरी निकासीका कारण यसको सौन्दर्य मासिएको जिल्लाबासीको गुनासो छ ।
बडिमालीकाको सौन्दर्य नियाल्न त्यति सजिलो छैन। धनगढीबाट डडेल्धुरा, डोटी अछाम हुँदै बाजुराको मार्तडीबाट त्रिवेणी पुगिन्छ। उचाइ निक्कै भएकाले त्यहाँ पुग्न सजिलो छैन।
यो मन्दिरमा सरकारका तर्फबाट एक जना पूजारी बनाइएका छन् । हाल कालिकोट जिल्ला फुकोट गा.वि.स.का श्री शिवराज उपाध्याय तथा उनका भाईहरू, छोराहरू कुनै एकले सरकारी पूजा गराउछन् । डोटी, अछाम, बाजुरा, कालिकोट र जुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा अन्य कर्मचारीहरूको हातबाट देविको सरकारी पूजा सम्पन्न हुन्छ।
पौराणिक कथा अनुसार महादेवकी पत्नी सतिदेवीका पिता दक्ष प्रजापतिले यज्ञा गर्दा महादेव र सतिलाई बोलाएनन् । सतिदेवि दक्ष प्रजापतीको यज्ञा स्थलमा गएर पितासँग आफ्ना पति महादेवलाई नबोलाउनाको कारण सोधिन् ।
दक्ष प्रजापतीले महादेव भाङ, धतुरो सेवन गर्ने, श्मसानमा वास गर्ने, गलामा सर्पको माला लगाउने, जटाधारी भेषमा रहने, शरिरभरी खरानी घस्ने, बाघको छालाको पहिरन गर्ने हुनाले यो यज्ञामा बस्दा शोभा भएकाले नबोलाएको भनि उत्तर दिए । आफ्ना पतिको यस्तो अपमान सहन गर्न नसकेर सतिदेविले यज्ञाकुण्डको अग्नीमा हाम फालेर प्राण त्याग गरिन् । त्यसपछी महादेव रिशाएर विरभद्रादी शिवगणलाई पठाएर दक्षलाई मारी दक्षको यज्ञ तहस नहस पार्न लगाए । त्यसपछी महादेव पत्नी वियोगमा पागल भएर सतिदेवीको मृत शरिर बोकेर पुरा विश्व घुम्न थाले । यसै बेला भगवान बिष्णुले आफ्नो चक्र सुदर्शण प्रहार गरी किरा पारेर सतिदेविको मृत शरिर कुहाए ।
यसरी ठाउँ ठाउँमा सतिका अङ्गहरू पतन हुँदै (झर्दै) खस्न थाले । यसरी ठाउँ ठाउँमा सतिका अङ्गहरू पतन हुँदै (झर्दै) खस्न थालेपछी जहाँ जहाँ सतिका अङ्ग पतन भए त्यहाँ त्यहाँ एक एकवटा सिद्ध पिठ बन्दै गए । यसै क्रममा मल्लागिरी प्रवतमा सतिको बायाँ कुम पतन भयो । त्यसै मल्लागीरीलाई अहिले मालिका भनिन थालियो । र यहाँ मल्लिका अथवा मालिका देवी शक्ति स्वरूपले रहन थालिन् । तसर्थ यस स्थानमा बडिमालिका मन्दिर स्थापना गरेर पूजा गर्न थालियो ।
भनिन्छ प्राचिन कालमा भगवतिले महिषासुर नामको दैत्यको बध गरी सके पछि कालिकोटको “द्वारेढुंगा” भन्ने ठाउँमा विश्राम गरेकी थिईन् । पछि गएर द्वारेढुंगामा एक जना दाउरा खोज्न गएको दलित भोकले व्याकुल भई देविसँग बहरको मासु र हिया गहुँको रोटी माग्यो । देविले त्यो दलितको मनोरथ पुरा गरी दिइन् दलितले पुरै बहरलाई एक्लै खान न सकिने भएकाले उसले आफ्नो घरका मान्छेलाई बोलाएछ । उसको घरको मानिसहरूले टाढा भएका कारण सुन्न सकेनन् । तब त्यो दलितलाई रिस उठ्यो उसले भगवतीलाई भन्यो हे! प्रमेश्वरी मेरा घरका सबै मान्छे मरुन् । देविले पनि इछ्छा अनुसार वरदान दिईन् । त्यसपछी बहरको मासु लिएर दलित घर गएछ । घरमा हेर्दा त सबै जहानहरू मरेका देख्यो ।
फेरी दलित रिसायर द्वारेढुंगा पुग्यो । देवि उसलाई देखेर ढोका बन्द गरी त्यहाँबाट भागिन् । दलिदले बहरको फिलाले देविको घरमा हानेको छाप अँझै द्वारे ढुङ्गामा देखिन्छ । यसो भएका कारण देवि हमेशाकालागी त्यो ठाउँ छोडेर त्रिवेणि, पंचपुरी पाटन, मल्ल पुरी पाटन हुँदै बडिमालिकामा गएर बसिन् । त्यसैले दलिदहरू बडिमालिका जाँदैनन् । अन्य भक्तजनहरू जो बाटो देवि गएकी हुन् त्यही बाटो भएर जान्छन् ।
बाटोमा खाना खाने र बास बस्ने ठाउँ सर्वसुलभ छैन। बडिमालिका दर्शन गर्न चाहनेले आफूलाई चाहिने सबै सामानको जोहो आफैंले गर्नुपर्छ। पछिललो समय कतैकतै अस्थायी पसल खुल्न थालेका छन्।
गाडीबाट बडीमालिका जान धनगढी वा नेपालगन्जबाट अछामको साँफेबगर पुग्नुपर्छ । त्यहाँबाट ब्रह्मतोलाको शेराबजारसम्म गाडीको सुविधा छ । बर्खायाममा भने सम्भव छैन । साँफेबगरबाटै हिँड्नुको विकल्प छैन । हवाईमार्गको प्रयोग गर्ने हो भने नेपालगन्जबाट बाजुरा विमानस्थल कोल्टी पुगिन्छ । कोल्टीबाट एक दिनको बाटो हिँडेर सदरमुकाम मार्तडी पुगिन्छ । सुदुर पश्चिमका पयर्टकीय स्थानहरूमा अति महत्त्वपूर्ण स्थलको रूपमा चिनिने बडिमालिका धार्मीक तथा ऐतिहासिक दृष्टीले महत्त्वपुर्ण मानिन्छ । मन्दिरमा पुग्न बाजुरा जिल्लाको सदरमुकाम मार्तडी बजारबाट पैदल हिंडेर जाँदा २ -३ दिनमा पुग्न सकिन्छ ।
तस्बिर : भुवन ऐर